K-Pop Idol ​တွေကို တခြားသူ​တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ အမှတ်မထင် ရိုက်ကူးမိခဲ့တဲ့ အခိုက်အတန့်များ | News Bar Myanmar
K-Pop Idol ​တွေကို တခြားသူ​တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ အမှတ်မထင် ရိုက်ကူးမိခဲ့တဲ့ အခိုက်အတန့်များ
မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Idol နဲ့ အတူတွဲပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရချင်တာဟာ ပရိသတ်တိုင်းရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က​တော့ ပရိသတ်ဟုတ်သည်ဖြစ်​စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်​စေ မထင်မှတ်ပဲ Idol ​တွေနဲ့ အတူ ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်​တွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ထဲကမှ လူသိများတဲ့ အဖြစ်အပျက် ၄ ခုက​တော့ ..
1. BTS အဖွဲ့ဝင် V နဲ့ Jungkook
တစ်ခါက ARMY (BTS ပရိသတ်) တစ်​ယောက်ဟာ ကံ​ကောင်းစွာပဲ BTS အဖွဲ့ဝင် V နဲ့ Jungkook တို့ကို သူမရဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ အမှတ်မထင် ရိုက်ကူးမိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်က BTS အဖွဲ့ဝင်​တွေဟာ Riyadh မြို့ Saudi Arabia နိုင်ငံမှာ ​LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF ကမ္ဘာလှည့်​ဖျော်​ဖြေမှုအတွက် ​ဖျော်​ဖြေပွဲကို ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်​ယောက်က ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံ​နေတဲ့အချိန်မှာ V နဲ့ Jungkook တို့က အနားက​နေ ဖြတ်​လျှောက်သွားတာကို ရိုက်ကူးမိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ​နောက်​တော့ ထိုအမျိုးသမီးဟာ Salwa Abuljadayel လို့အမည်ရပြီး Riyadh မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ​ဖျော်​ဖြေပွဲလုပ်အတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။
2. TWICE အဖွဲ့ဝင် Nayeon
TWICE အဖွဲ့ဝင် Nayeon ဟာလည်း သူစိမ်းတစ်​ယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ မ​မျှော်လင့်ပဲ ပါလာခဲ့ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံကို တင်တဲ့ မိန်းက​လေးက အင်္ကျီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ​ထောင်ထားတဲ့ ကိုယ်လုံး​ပေါ်မှန်မှာ mirror selfie ရိုက်ရင်း သူမရဲ့ အ​နောက် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရှိတဲ့ Nayeon ကို ရိုက်ကူးမိခဲ့တာပါ။
ထိုသို့ ရိုက်ကူးမိခဲ့တာကို ပုံတင်တဲ့ မိန်းက​လေးကိုယ်တိုင်​ရော Nayeon ​ရော သတိထားမိတဲ့ပုံ မ​ပေါ်ပါဘူး။ ​​​ဓါတ်ပုံထဲမှာ ခေါင်းစွပ်အင်္ကျီနဲ့ မိတ်ကပ်မပါပဲ ရိုက်ကူးခဲ့မိတဲ့ Nayeon ရဲ့ မျက်နှာထားက ပရိသတ်အများစုအတွက် ရယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါ​သေးတယ်။
3. EXO အဖွဲ့ဝင် Sehun နဲ့ Suho
EXO အဖွဲ့ဝင် Sehun နဲ့ Suho က​တော့ ခရီးသွားတစ်​ယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုခရီးသွားဟာ ပို့စ်​ပေး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ပြီး သူမရဲ့ အ​နောက်မှှာ လူ​တွေ​ရော ကား​တွေ​ရော ရှိ​နေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလူ​တွေထဲကမှ ထိုင်​နေတဲ့ လူ ၂ ​ယောက်ကို သိမ်းဌက်လို စူးရှတဲ့ အမြင်အာရုံရှိတဲ့ ပရိသတ်​တွေက သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ထိုလူ ၂​ ​ယောက်က​တော့ EXO အဖွဲ့ဝင် Sehun နဲ့ Suho ပဲဖြစ်ပါတယ်။
4. BTS အဖွဲ့ဝင် RM
Twitter သုံးစွဲသူတစ်​ယောက်ဟာ သူမနဲ့ သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူတို့ Copenhagen ကို သွား​ရောက်လည်ပတ်စဉ်က ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံ​တွေကို ပြန်ကြည့်ရင်း ပုံတစ်ပုံမှာ BTS အဖွဲ့ဝင် RM ပါ​နေတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ​လှေစီးပြီး အပန်း​ဖြေလည်ပတ်​နေစဉ် သူမဟာ မိခင်ဖြစ်သူကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကူး​ပေးခဲ့​ပေမဲ့ သူမ အ​မေရဲ့ အ​နောက်မှာ RM ရှိ​နေတာကို မသိခဲ့ပါဘူး။
ထိုအချိန်က RM ဟာလည်း ဥ​ရောပနိုင်ငံတွေကို အပန်း​ဖြေ သွား​ရောက်လည်ပတ်​နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဓါတ်ပုံကို ရိုက်ကူးခဲ့တာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအချိန်က သူမဟာ BTS ရဲ့ ပရိသတ်မဟုတ်​​သေးတဲ့အတွက် RM ကို သတိမထားမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Next Depression ဝင်ခြင်းနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက် အကြုံပြုခဲ့တဲ့ BTS's SUGA »
Previous « "Butter" သီချင်းနဲ့ နိုင်ငံ​ပေါင်း ၁၀၀ ​ကျော်က iTunes chart ​တွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်​နေတဲ့ BTS